Masinina Laser Die-cutting Digital
Lakan-damba fanala rivotra
Label, Adhesive, Tape mitaratra
Hoditra & Kiraro
Nahoana no Goldenlaser
Slide teo aloha??
Ny antsipirian'ny slide voalohany.
Ny antsipirian'ny slide faharoa.
Tsipirian'ny slide fahatelo.
Tongasoa eto amin'ny GOLDENLASER
Goldenlaser dia mifantoka amin'ny fanomezana vahaolana laser manan-tsaina, nomerika ary mandeha ho azy.
Mpanamboatra rafitra laser ho an'ny fanapahana, sokitra ary marika.The specialist inCO2 tamin'ny laser fanapahana milina,Galvo tamin'ny laser milinaSYmilina fanapahana maty tamin'ny laser nomerika.
Manomboka amin'ny fifampidinihana voalohany ka hatramin'ny fitsapana fampiharana miaraka amin'ireo fitaovana novolavolainao amin'ny indostria manokana ka hatramin'ny fanofanana ho an'ny mpampiasa sy ny serivisy manerantany - Goldenlaser dia manolotra vahaolana laser feno, fa tsy milina tokana!
Laharana modely: Série JMCCJG / JYCCJG
Masinina fanapahana laser lamba indostrialy haingam-pandeha
Ity andian-dahatsoratra CO2 flatbed tamin'ny laser fanapahana milina dia natao ho an'ny malalaka lamba lamba horonana sy malefaka fitaovana ho azy sy tsy tapaka fanapahana.Entin'ny fitaovana sy ny rack miaraka amin'ny motera servo, ny mpanapaka laser dia manome ny hafainganam-pandeha ambony indrindra sy ny fanafainganana.
Laharana modely: JMCCJG-350400LD
Fitaovam-pitaovana avo lenta sy rack.Haingam-pandeha hatramin'ny 1200mm/s.CO2 RF laser 150W hatramin'ny 800W.Vacuum conveyor rafitra.Auto-feeder misy fanitsiana ny fihenjanana.Mety amin'ny fanapahana lamba sivana, sivana tsihy, polyester, PP, fiberglass, PTFE sy ny indostria lamba.
Laharana modely: JMCZJJG(3D)-250300LD
Ny fitambaran'ny endrika lehibe X, Y axis tamin'ny laser fanapahana (trimming) sy ny hafainganam-pandeha avo Galvo tamin'ny laser perforating (laser tapaka lavaka).Izy io dia natao ho an'ny fanapahana ny lakandrano fandoroana lamba (sock duct, sox duct, duct sox, duct sock, textile air duct, air sock, air sox)
Laharana modely: JYCCJG-1601000LD
Masinina fanapahana laser habe ambony latabatra
Fandrian'ny fanapahana lava kokoa- Specialty6 metatra, 10 metatra ka hatramin'ny 13 metatraNy haben'ny fandriana ho an'ny fitaovana lava kokoa, toy ny lay, sailcloth, parachute, paraglider, canopy, marquee, awning, parasail, alokaloka, karipetra fiaramanidina…
Laharana modely: JMCZJJG(3D)170200LD
Galvo & Gantry Laser Engraving Machine Cutting ho an'ny lamba, hoditra
Ity rafitra laser ity dia manambatra ny galvanometer sy XY gantry.Ny Galvo dia manolotra sary sokitra haingana, etching, perforating ary fanapahana fitaovana manify.XY Gantry dia mamela ny fanodinana ny mombamomba lehibe kokoa sy ny tahiry matevina.
Laharana modely: ZJJF(3D)-160LD
Mihodinkodina amin'ny Rolling Flying Fabric Laser Engraving Machine
Rafitra Galvo mavitrika 3D, mamarana ny marika sokitra mitohy amin'ny dingana iray.teknolojia tamin'ny laser "amin'ny lalitra".Mety amin'ny endrika lehibe lamba, lamba, hoditra, denim, sokitra EVA.
Laharana modely: ZJ(3D)-9045TB
milina fanoratana laser Galvo haingam-pandeha ho an'ny kiraro hoditra
CO2 RF metaly laser 150W 300W 600W.3D dynamic galvanometer rafitra fanaraha-maso.Miakatra sy midina mandeha ho azy Z axis.Automatic shuttle zinc-vy firaka latabatra miasa.
Laharana modely: ZJ(3D)-15050LD
Faritra lehibe galvanometer rafitra scanning.Loharano laser maromaro hampitombo ny vokatra.Famahanana sy famerenana mandeha ho azy - conveyor…
Laharana modely: CJGV-160130LD
Sublimation Fabric Laser Cutter ho an'ny Fanatanjahantena
Vision tamin'ny laser dia mety tsara amin'ny fanapahana dizitaly fanontam-pirinty sublimation lamba lamba amin'ny endriny rehetra sy ny habeny.Ny fakan-tsary dia mibanjina ny lamba, mamantatra sy mamantatra ny contour vita pirinty, na maka amin'ny marika fisoratana anarana vita pirinty ary manapaka ireo endrika voafantina amin'ny hafainganam-pandeha sy marina.
Laharana modely: Ampahany QZDXBJGHY-160100LDII
Tsy miankina Dual Head Camera Laser Cutting Machine
Ny rafitra fanapahana tamin'ny laser loha roa tsy miankina dia mitambatra tsara amin'ny rafitra fahitana marani-tsaina, ary manatsara kokoa ny fepetra takian'ny fanodinana sary vita pirinty.
Laharana modely: Ampahany MZDJG-160100LD
High precision fisoratana anarana manamarika toerana sy manan-tsaina deformation onitra ho an'ny tamin'ny laser fanapahana marina ny loko sublimation pirinty logos, litera sy isa.
Laharana modely: CJGV-320400LD
Wide Format Laser Cutter ho an'ny saina lehibe, sora-baventy, famantarana malefaka
Ny fanapahana tamin'ny laser fahitana lehibe dia manokana ho an'ny indostrian'ny fanontana nomerika - mamokatra fahaiza-manao tsy manam-paharoa amin'ny famitana ny endrika midadasika vita pirinty nomerika na sary vita amin'ny loko vita amin'ny loko, sora-baventy ary famantarana malefaka.
Laharana modely: LC350
Haingam-pandeha avo roa lohany tamin'ny laser fanapahana rafitra.Modular sy multifunctional all-in-one design.Mampiasa CO2, IR na UV fanaterana taratra mba hanome hery isan-karazany sy ny halavan'ny onjam.Mety amin'ny horonan-taratasy mihodinkodina manapaka sarimihetsika avo lenta, kasety ary adhesives.
Laharana modely: LC-350
Dieless tamin'ny laser fanapahana sy niova fo vahaolana ho an'ny marika famaranana.Ny mpamaky kaody QR dia manohana ny fanovana mandeha ho azy amin'ny lalitra.Ny Web Guide dia mahatonga ny fialana sy ny famerenana amin'ny fomba mazava kokoa.
Laharana modely: LC-230
LC230 dia milina famenoana laser vita amin'ny laser, ara-toekarena ary nomerika feno miaraka amin'ny sakan'ny tranonkala ambony indrindra 230mm.Safidy tsara ho an'ny hazakazaka fohy nomerika.Manolotra fiovana aotra rehefa mandeha ny fotoana ary tsy misy vidin'ny takelaka maty.
Manam-pahaizana manokana amin'ny fanapahana laser sy vahaolana sokitra ho an'ny fampiharana maro karazana.Ireto misy vitsivitsy amin'ireo fampiharana izay iasanay matetika.
Fidio ny indostrianao: ny vahaolana laser mety indrindra ho anao.
HODY & Kiraro
Miaraka amin'ny fanavaozana ara-teknolojia matanjaka, Golden Laser dia afaka manome milina sy vahaolana vita amin'ny laser namboarina, hahatonga ny famokaranao mahomby kokoa sy mahasoa.
Nahoana no Laser
Amin'ny maha fanavaozana ara-teknolojia amin'ny vanim-potoana, ny laser dia mivoatra miaraka amin'ny tombony tsy manam-paharoa, manolo ny dingana mahazatra kokoa.
Manome fanohanana serivisy foana.Injeniera afaka manompo milina any ampitan-dranomasina ho an'ny serivisy fametrahana, serivisy fanofanana ary serivisy fikojakojana.
Tsidiho eto ny fampahalalana momba ny indostria mifandraika amin'izany sy ny vaovao sy ny hetsika vao haingana.
Ny fanapahana tamin'ny laser fibre karb?nina dia azo atao amin'ny laser CO2, izay mampiasa angovo faran'izay kely nefa manome vokatra avo lenta.Ny teknolojia fanodinana ny fibre karbonina fanapahana tamin'ny laser dia manampy amin'ny fampihenana ny tahan'ny fako raha oharina amin'ny teknika famokarana hafa…
Lasa ampahany amin'ny fomba fanao ny saron-tava fanaparitahana tamin'ny laser
Rehefa tonga amin'ny famoronana saron-tava sublimation mahazatra, ny mpanapaka laser dia mety ho ampahany manan-danja amin'ny fanaovana ireo singa manaitra ireo.Ireto misy hevitra sasantsasany momba ny fomba ahafahanao mampiasa ity teknolojia vaovao ity…
Manapaka lamba sivana amin'ny laser ho an'ny kalitao avo lenta
Mpanamboatra lamba sivana maro no nampiasa milina fanapahana tamin'ny laser tsara indrindra avy amin'ny goldenlaser, ka mampifanaraka ny lamba sivana amin'ny filan'ny mpanjifa tsirairay ary miantoka ny fiverenana haingana…
Manufacturing Precision ? Miezaka tsara
Laser Solutions mpitarika mpamatsy
Amin'ny 20 taona 'traikefa tamin'ny laser orinasa, tsy mitsaha-mivoatra sy mampiasa teknolojia avo lenta, Goldenlaser dia lasa mpitarika mpanamboatra tamin'ny laser milina amin'ny fahaiza-manao customization be pitsiny.
> Diniho ny milina laser
Goldenlaser dia manolotra anao vahaolana laser matihanina ho an'ny indostrian'ny fampiharana manokana anao - hanampy anao hampitombo ny vokatrao, hanamora ny fomba fanodinana ary hahazoana tombony bebe kokoa.
> Diniho ny vahaolana laser
Ao amin'ny tsena any ivelany, Goldenlaser dia nanangana tambajotra ara-barotra matotra any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 100 eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny vokatra mifaninana sy ny rafitra fanavaozana mifototra amin'ny tsena.
> Mianara bebe kokoa momba ny Goldenlaser
Kely CO2 Laser Cutter
Fashion & Fitafiana
Fitaovana azo atao amin'ny laser
sari-tany Goldenlaser Industrial Park, Tianxing Road, Chuanlong Avenue, Huangpi District, Wuhan, Hubei, Sina
valopy izany info@goldenlaser.com
Copyright ? 20052021 Wuhan Golden Laser Co. Ltd. Zo rehetra voatokana.